प्राकृतिक घरेलु उपचारको साथ कसरी कपाल झर्ने र सल्लाहहरू नियन्त्रण गर्न उपायहरू - घरेलु उपचार
कपाल खस्न रोक्न घरेलु उपचार
केटी को लागी कपाल काट्ने शैली
'मुकुट महिमा' को रूपमा सन्दर्भ गरिएको, कपडा भनेको व्यक्तिको व्यक्तित्व र शैलीको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो। अत्यधिक कपाल झर्नु समस्याग्रस्त समस्या हुन सक्छ, अक्सर चिन्ताको कारण र आत्म-सम्मानलाई असर गर्ने, विशेष गरी महिलाहरूको लागि। जहाँसम्म, सही निदान भयो भने, तपाईं केश फार्मलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ केही घरेलू उपचारहरू जुन प्राकृतिक र तपाईंको लकहरू बचत गर्नमा प्रभावकारी छन्।
१ कपाल झर्नुको कारण
दुई कपाल पतन नियन्त्रणको लागि सुझावहरू
3 केश झर्नेको उपचार गर्ने प्राकृतिक उपचार
चार स्वस्थ कपालको लागि डाइट
।। स्वस्थ लकहरूको लागि कपालको देखभाल सल्लाहहरू
। कपाल पतन मा FAQS
कपाल झर्नुको कारण
१. पौष्टिक कमीहरू
यो सम्भव हुन सक्छ कि आवश्यक पोषकहरू तपाईंको आहार जस्तो कि फलाम, तामा, जिंक र प्रोटीनहरूबाट हराइरहेको हुन सक्छ। भिटामिन डी को अभाव कपाल झर्ने अर्को कारण हो। यसलाई रोक्नको लागि, निश्चित हुनुहोस् निश्चित रूपमा बाहिर जानुहोस् र केही घाम मा सोख्नुहोस्।
२. हार्मोनल असंतुलन
30० बर्षको उमेर पछि, महिलाले हार्मोनल असंतुलनको अनुभव गर्न सक्दछन् जसले कपाल झर्ने बनाउन सक्छ। यो सामान्यतया अत्यधिक डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) रूपान्तरणको कारणले हुन्छ। जे होस् एस्ट्रोजेन मुख्य हार्मोन हो जुन महिलाले उत्पादन गर्दछ, टेस्टोस्टेरोन र अन्य एन्ड्रोजनहरू जस्तै DHEA पनि महिला शरीरमा देखा पर्दछ। महिलाहरू एक निश्चित उमेर पुगेपछि, तिनीहरूले यी एन्ड्रोजनहरूलाई DHT मा रूपान्तरण गर्न सुरू गर्न सक्दछन्।
Th. थाइरोइड मुद्दाहरू
यदि घाँटीको अगाडि रहेको थाइरोइड ग्रंथिले अत्यधिक वा अपर्याप्त मात्रामा थाइरोइड हर्मोन उत्पादन गर्छ भने कपालको वृद्धि चक्र परिवर्तन हुन सक्छ। जहाँसम्म, यदि तपाईंसँग थाइरोइड मुद्दा छ भने, तपाईंले अन्य लक्षणहरू देख्नुहुनेछ जस्तै कपाल झर्नु जस्तै वजन बढाउनु वा हराउनु, चिसो वा तातोमा संवेदनशीलता, र मुटुको दरमा परिवर्तन।
Pol. पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम (PCOS)
महिलाहरु संग पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिन्ड्रोम (पीसीओएस) सँग हार्मोनल असंतुलन हुन्छ जसले सामान्य भन्दा उच्च स्तरको एन्ड्रोजेनहरू सिर्जना गर्दछ। यसले अक्सर अनुहार र शरीरमा कपाल बढ्दछ, जबकि टाउकोको कपाल पातलो हुँदै जान्छ। PCOS ले पनि ovulation समस्या, एक्ने, र वजन बढाउन सक्छ।
Birth. जन्म नियन्त्रण गोलीहरु
गर्भनिरोधक गोलीहरूले कपाल खण्डन गर्न सक्छ। ओभुलेशनलाई दबाउने गोलीमा रहेको हर्मोनले कपाल पातलो हुन सक्छ, विशेष गरी महिलामा कपाल झर्नेको पारिवारिक इतिहासका साथ। कहिले काँही कपाल झर्न सक्दछ जब तपाईं गोली लिने बन्द गर्नुभयो। कपाल झर्नेसँग सम्बन्धित अन्य औषधीहरू रगत पातलो र औषधी हुन् जसले उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गठिया, र डिप्रेसनको उपचार गर्दछन्।
अत्यधिक तनावले अचानक केश झर्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ जुन धेरै महिनासम्म रहन सक्छ। व्यायाम, ध्यान द्वारा थोरै तनाव योग र मसाजले तपाईंको कपाल झर्ने अनुभवको सम्भावनालाई कम गर्दछ।
Hai. कपालका सामानहरू
र -्ग र स्टाइलिंग उत्पादनहरूमा फेला परेका विषाक्त रसायनहरूको कारण अत्यधिक-उपचार गरिएको कपालले कपाल झर्न सक्छ। त्यस्तै गरी, प्राय सबै शैम्पूहरूमा सोडियम लौरील सल्फेट (एसएलएस) हुन्छ जसले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीमा एक विषाक्त प्रभाव पार्छ र कपालको फोलिकल्सलाई झिक्न र कपालको वृद्धिको अवरोधमा प्रमाणित भएको छ। प्राकृतिक शैम्पू र र toमा टाँस्न सल्लाह दिइन्छ।
Medical. चिकित्सा अवस्था
- टेलोजेन इफ्लुभियम
सबै टाउको देखि सामान्य बहाउने। हामी सामान्यतया दिनमा १०० कपाल गुमाउँछौं तर कहिले काहिँ तनाव, बिमारी, औषधी वा हर्मोनको कारण बहाव तीव्र हुन्छ। कपाल सामान्यतया छ महिना भित्र फिर्ता हुर्कन्छ।
- एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेशिया
महिलामा, कपाल सामान्यतया शीर्षको, फ्रन्टल क्षेत्रमा पात हुन्छ, हेयरलाइनको पछाडि, तर पछाडि बाक्लो रहन्छ। इन्जाइमको कारणले पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोनलाई अर्को हर्मोन, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) मा रूपान्तरण गर्ने कारणले कपाल कपाल पातलो कपाल उत्पादनको लागि रोकिन्छ जब सम्म उनीहरू रोकिदैनन्।
जनसंख्याको २% सम्ममा असर पार्ने एक अटोइम्यून रोग। यसले कपाल झर्नेको गोल प्याचहरू निम्त्याउँछ र पूरै ट्यान्डनेस हुन सक्छ। धेरै केसहरूमा, कपाल फेरि उल्टिन्छ।
जब हामी उमेरपुग्छौं, हाम्रो कपाल बढ्ने दर सुस्त हुन्छ। कपाल तारहरू साना हुन्छन् र कम रment्गीन हुन्छ, र कपाल पातलो, महीन र खैरो बन्छ। तपाईंको कपाल स्वस्थ राख्नको लागि सम्पूर्ण खाना खानुहोस् जसले तपाईंको शरीरलाई जवान राख्न मद्दत गर्दछ, साथ साथै तपाईंको कपाल। यदि तपाईंसँग छ भने समयपूर्व खैरो कपाल , तपाईं यहाँ प्राकृतिक पूरकहरू पाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ।
कपाल झर्नु जुन आनुवंशिक हुन्छ एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेशियाको रूपमा चिनिन्छ र कपाल झर्ने सबैभन्दा सामान्य कारणका रूपमा परिचित छ। जीन कि त तपाईको आमा वा परिवारका पक्षबाट पाएको हुन सक्छ, यद्यपि तपाईलाई यो अधिक सम्भावना छ यदि तपाईका आमा बुबा दुबै कपाल झर्नु भएको छ भने।
कपाल पतन नियन्त्रणको लागि सुझावहरू
तपाईको स्क्याल्प प्रकार बुझ्न र सहि शैम्पू छनौट गर्न यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। साथै, तपाईको कपाल तपाईको कपालमा निर्भर गर्दै तपाईले कपाल धुनु पर्छ। उदाहरण को लागी, क साथ एक कपाल धुने ड्राई स्क्याल्प कपाल झर्नु पर्ने हुन्छ वा हप्तामा तीन चोटि तेल लक नहाल्दा समान हुन सक्छ।
यस बाहेक, यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि शैम्पूले सल्फेट, पराबेन र सिलिकॉन सहित रसायनहरू भरिएको छैन कि यसले तपाईंको ट्रेसलाई भंगुर बनाउन सक्छ र त्यसैले बिग्रन सक्ने सम्भावना छ।
राम्रो कन्डिसनरले तपाइँका लकहरूको लागि आश्चर्य कार्य गर्दछ। यसमा अमीनो एसिडहरू छन् जसले क्षतिग्रस्त कपालहरू मर्मत गर्न मद्दत गर्दछ, र तिनीहरूलाई चिल्लो राख्नको लागि पनि मद्दत गर्दछ।
D. डाईट र व्यायाम
तपाईंले आफ्नो कपाल सबै ठीक पोषक विशेष गरी प्रशस्त प्रोटीन र फलामको पोषण गर्न आवश्यक छ। जे होस्, एक खान संग सन्तुलित आहार निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई सँगसँगै व्यायाम गर्दै हुनुहुन्छ। योग र ध्यान कपाल झर्ना कम गर्न प्रभावकारी छन्।
Che. रासायनिक उपचार
कडा कपालका उपचारहरू जस्तै स्ट्रीटइनिंग, पेर्मि and र कलरिंग पनी पक्कै पनि तपाईंको कपालमा दयालु हुँदैन। अगाडि प्रयोग नगर्नुहोस् सुकाउने ड्रायर , कर्लिंग डन्डीहरू, विशेष गरी भिजेको कपालमा किनकि उनीहरूले तपाईंको कपालको शाफ्टमा पानी उमालेर भंगुर बनाउँदछन्।
यदि तपाईंलाई वास्तवमै एक झण्डा सुख्खा प्रयोग गर्न आवश्यक छ भने, त्यसपछि यसलाई न्यून तातो सेटिंगमा राख्नुहोस्। यदि तपाइँको कपाल तातो अन्य उत्पादनहरु को उपयोग गरीरहेको छ भने, एक मजबूत छोड्ने-इन कन्डिशनर को साथ शुरू र एक सुरक्षा स्प्रे संग समाप्त।
तेलले रक्त संचारमा सुधार गर्दछ र जरालाई पोषण दिन्छ। हप्ताको एक चोटि तेलमा मालिश गर्न नबिर्सनुहोस् जुन तपाईंको टाउकोको सूट सूट गर्दछ। यसलाई नुहाउने क्यापले कभर गर्नुहोस् र दुई घण्टा पछि यसलाई हल्का शैम्पूले धुनुहोस्।
T. धेरै धेरै स्टाइलिंग उत्पादनहरू
तपाईको कपालमा धेरै रसायनले भरिएका उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा लामो समयसम्म हानिकारक हुन सक्छ। तिनीहरूलाई विश्राम दिन र यसको सट्टा प्राकृतिक घरेलु रेसिपीहरू प्रयोग गर्नु उत्तम हो।
केश झर्नेको उपचार गर्ने प्राकृतिक उपचार
१. अण्डाको मास्क
अण्डा सल्फर, फस्फोरस, सेलेनियम, आयोडिन, जिंक र प्रोटीनमा धनी हुन्छन्, जसले सँगै प्रचार गर्न मद्दत गर्दछ कपाल वृद्धि ।
मास्क तयार गर्न:
एक भाँडामा एक अण्डा सेतो अलग गर्नुहोस् र प्रत्येक एक चम्मच जोड्नुहोस् जैतुनको तेल र मह।
पेस्ट बनाउनको लागि बिट गर्नुहोस् र सबै जरा देखि सुझावहरूमा यसलाई लागू गर्नुहोस्।
२० मिनेट पछि हल्का शैम्पूले पखाल्नुहोस्।
२ लाइसेरस रूट
यो जडिबुटीले कपाल झर्ने र कपालमा हुने थप क्षतिलाई रोक्दछ। यसले टाउकोलाई शान्त पार्न र कुनै पनि ड्राई फ्लेक्स / डन्ड्रफबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ।
एक कप दूधमा एक बड़ा चम्मच ग्राउन्ड मदिरा मूल जम्मा र एक चौथाई चम्मच केसर जोड्दै पेस्ट बनाउनुहोस्।
यसलाई तपाईंको स्क्याल्प र कपालको लम्बाइमा लागू गर्नुहोस् र रातभरमा छोड्नुहोस्।
अर्को बिहान, आफ्नो कपाल धुनुहोस्।
हप्तामा दुई पटक यो दोहोर्याउनुहोस्।
C. नरिवलको दुध
यसमा रहेको प्रोटीन र आवश्यक बोसोले कपालको विकासलाई बढावा दिन्छ र कपाल झर्ने रोक्दछ।
दूध तयार गर्न:
एक मध्यम आकारको नरिवल ग्रेट गर्नुहोस् र यसलाई पाँच मिनेटको लागि प्यानमा उमालेर राख्नुहोस्।
तनाव र चिसो।
त्यसपछि कुचिएको कालो मिर्च र मेथीको दानालाई एक बड़ा चम्चा दूधमा थप्नुहोस्।
तपाईंको स्क्याल्प र कपालमा लागू गर्नुहोस्।
२० मिनेट पछि, शैम्पूको साथ कुल्ला।
Green. हरियो चिया
यो चिया एन्टीआक्सीडन्टमा समृद्ध छ, जसले कपालको वृद्धि बढाउन र कपाल झर्न रोक्न मद्दत गर्दछ।
दुई-तीन टीबागहरू एक दुई कप कपमा तपाईंको कपालको लम्बाई अनुसार भिजाउनुहोस्।
जब यो चिसो हुन्छ, यसलाई तपाईंको छाला र कपालमा खसाल्नुहोस्, जबकि हल्का रूपमा तपाईको टाउको मालिश गर्नुहोस्।
एक घण्टा पछि चिसो पानी संग कुल्ला।
Be. बिटरुट जुस
बीटरुट भिटामिन सी र बी rich, फोलेट, मैंगनीज, बेटाइन र पोटेशियम समृद्ध हुन्छ, ती सबै स्वस्थ कपालको विकासको लागि आवश्यक छन्। यसबाहेक, यसले टाळू सफा राख्न मद्दत गरी डिटोक्सिफिकेसन एजेन्टको रूपमा कार्य गर्दछ।
--8 बीटरूट पात उमालेर 5--6 हेन्ना पातहरू साथ पीस्नुहोस्।
तपाइँको छालामा यो पेस्ट लागू गर्नुहोस् र न्यानो पानीले पखाल्नु अघि १-20-२० मिनेटसम्म छोड्नुहोस्।
Greek. ग्रीक दही र मह
एक कचौरामा २ चम्चा दहीको १ चम्चा मह र निम्बू मिक्स गर्नुहोस्।
डाई ब्रशको प्रयोग गरेर यो पेस्टलाई स्क्याल्प र जरामा लगाउनुहोस्।
चिसो पानीले पखाल्नु अघि minutes० मिनेटसम्म यसलाई छोड्नुहोस्।
हप्तामा एक पटक यो टाँस्नुहोस्।
A. एलो भेरा
घ्यु कुमारी कपाल झर्ने र कपालको बृद्धि गर्नका लागि एक प्रभावकारी घरेलु उपचार हो। यो खुजली को समस्याहरु लाई कम गर्न को लागी प्रभावकारी छ जस्तै खुजली र flaking।
एलो भेराको डाँठ लिनुहोस् र पल्प निकाल्नुहोस्।
यसलाई तपाईंको कपाल र टाउकोमा लागू गर्नुहोस् र यसलाई लगभग minutes 45 मिनेटको लागि छोड्नुहोस्।
सामान्य पानी संग कुल्ला। राम्रो परिणामहरू हेर्न तपाईं हप्तामा तीनदेखि चार पटक यो गर्न सक्नुहुन्छ।
F। मेथीको गेडागुडी
मेथी वा मेथीको दाना केश झर्ने समस्या रोक्नको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी घरेलु उपचार हो। यसले कपालको फोलिकल्स मर्मत गर्दछ र कपालको पुन: विकासमा मद्दत गर्दछ।
मेथीको दानालाई रातभरि पानीमा भिजाउनुहोस्।
यसलाई राम्रो पेस्टमा पीस्नुहोस् र यसलाई तपाईंको कपाल र टाउकोमा लगाउनुहोस्।
लगभग minutes० मिनेटको लागि तपाईको टाउकोमा टाँस्नुहोस्।
तपाइँ ओसिलो राख्नको लागि नुहाउने टोपी प्रयोग गरी तपाइँको छाला कभर गर्न सक्नुहुन्छ।
To० देखि minutes० मिनेट पछि, यसलाई सामान्य पानीले कुल्ला।
तपाईंले कुनै शैम्पू प्रयोग गर्नुपर्दैन।
केश झर्ने नियन्त्रणको लागि हप्तामा दुई पटक यो एक महिना गर्नुहोस्।
On। प्याजको जुस
प्याजको एन्टिब्याक्टेरियल गुणहरूले स्काल्प इन्फेक्सन विरूद्ध लड्न मद्दत गर्दछ, जबकि सल्फर सामग्रीले कपालको कपालमा रगतको सर्कुलेसन सुधार गर्दछ। यसले कपालको बृद्धिलाई बढावा दिन्छ र कपालको घाटा नियन्त्रण गर्दछ।
झिक्न प्याज को रस , प्याज पीस र त्यसपछि रस बाहिर निचोरेर।
प्याजको रसमा कपासको बल डुब्नुहोस् र यसलाई तपाईंको स्क्याल्पमा लगाउनुहोस्।
यसलाई २० देखि minutes० मिनेटसम्म छोड्नुहोस् र त्यसपछि सामान्य पानी र हल्का शैम्पूको प्रयोग गरेर यसलाई धोउनुहोस्।
हप्तामा एक पटक यो प्रक्रिया अनुसरण गर्नुहोस् र फरक हेर्नुहोस्।
भारतीय छाला वा आंवला केश झर्ने रोक्नको लागि अर्को प्रभावकारी घरेलु उपचार हो। यसको एउटा कारण भिटामिन सी को कमी हो, यसैले आंवला सेवन गर्दा कपालको फोलिकल्स बलियो हुन्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। यसको एन्टी-इन्फ्लेमेटरी र एक्सफोलिटि properties गुणहरूको लागि धन्यवाद, आँवलाले कपालको छिटो विकास बढाउन मद्दत गर्दछ, स्वस्थ टाउकोको छाल कायम गर्दछ र समयपूर्व फूलन रोक्छ
१ तपाइँ एक पेस्ट बनाउनको लागि चूना को रस र आंवला पाउडर मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई तपाईंको स्क्याल्प र कपालमा मसाज गर्नुहोस्।
तपाईंको टाउको कभर गर्नको लागि नुहाउने क्याप प्रयोग गर्नुहोस् ता कि टाँस्न नसक्ने गरी।
यसलाई एक घण्टाको लागि राख्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई सामान्य पानीले कुल्ला।
स्वस्थ कपालको लागि डाइट
जबकि उपचार र शैम्पूहरूले स्वस्थ कपाल कायम राख्न भूमिका खेल्छन्, बाक्लो, चम्किला, कडा ताँदको रहस्य एक स्वस्थ आहार हो।
फलामको अभाव कपाल झर्नुको मुख्य कारण हो। पालक केवल फलामको एक महान स्रोत मात्र होइन तर भिटामिन ए, सी र प्रोटीन पनि हो। यसले सेबम पनि समावेश गर्दछ जुन कपालको लागि प्राकृतिक कन्डिशनरको रूपमा काम गर्दछ र हामीलाई ओमेगा acid एसिड, म्याग्नेशियम, पोटेशियम र क्याल्सियम प्रदान गर्दछ। यी एक स्वस्थ स्क्याल्प र लसदार कपाल कायम गर्न मद्दत गर्दछ।
आँखाको लागि राम्रो भनेर चिनिन्छ, गाजरमा भिटामिन ए हुन्छ जसले केशको बृद्धिलाई पनि सुधार गर्दछ। भिटामिन ए को कमी को कारण सुक्खा र हुन सक्छ खुजलीको छाला । गाजरले कपालको मोटाईमा थप्न, कपाललाई कडा बनाउने, रक्त संचारलाई सुधार्न, कपाललाई सुदृढ पार्न, कपाललाई प्रदूषण जस्ता बाह्य क्षतिहरूबाट जोगाउन र कपालको टुटाउन र कपाल पतन रोक्न मद्दत गर्दछ।
किनकि कपाल percent 68 प्रतिशत केराटिन प्रोटीन मिलेर बनेको छ, अण्डाहरूले क्षतिग्रस्त कपाललाई पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ। तिनीहरू बायोटिन भन्ने बी भिटामिनमा पनि धनी छन् जसले कपाल बढ्न मद्दत गर्दछ।
ओट्स फाइबर, जिंक, फलाम, ओमेगा fat फ्याट्टी एसिड र पालिअनसेच्युरेटेड फ्याट्टी एसिड (पीयूएफए) मा समृद्ध छन् जसले कपालको बृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्दछ र तपाईंको कपाल बाक्लो र स्वस्थ बनाउँदछ।
अखरोटमा बायोटिन, बी भिटामिन (बी १, बी and र बी)), भिटामिन ई, प्रचुर मात्रामा प्रोटीन र म्याग्नीशियम हुन्छ - यी सबैले कपालको कटिकल्सलाई सुदृढ पार्छ र खोपडीको पोषण गर्दछ। यसले तपाईंको कोषहरूलाई डीएनए क्षतिबाट बचाउन मद्दत गर्दछ जुन घामको जोखिमको कारणले हुन सक्छ।
दाल प्रोटीन, फलाम, जिंक, र बायोटिनको एक महान स्रोत हो। तिनीहरूसँग फोलिक एसिड पनि हुन्छ जुन रातो रक्त कोशिकाको स्वास्थ्य पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक हुन्छ जसले छाला र टाउकोको छालालाई चाहिने अक्सिजन प्रदान गर्दछ।
कुखुराको मासु जस्तो कुखुरा वा टर्की उच्च-गुणस्तरको प्रोटीनयुक्त हुन्छ जसले नाजुक कपाललाई मद्दत गर्दछ र भोक रोक्दछ।
Stra. स्ट्रबेरी र ग्वाभास
स्ट्रबेरीमा सिलिकाको उच्च स्तर हुन्छ। सिलिका कपाल बल र कपाल को विकास को लागी एक महत्त्वपूर्ण खनिज हो। सिलिका समृद्ध अन्य खाद्य पदार्थहरु मा चावल, जई, प्याज, बन्दकोबी, काकडी र फूलगोभी शामिल छन्। भिटामिन सीले कपाललाई भंगुर र भाँचिनबाट बचाउँछ। जबकि हामी अक्सर संतरेको बारेमा भिटामिन सीको उत्तम स्रोतको रूपमा सोच्दछौं, एउटा अमरुदले चारदेखि पाँच गुणा बढी प्याक गर्दछ।
दही भिटामिन बी and र भिटामिन डीले भरिएको हुन्छ जुन कपालको फोलिकल स्वास्थ्य प्रमोट गर्नका लागि परिचित छ।
१० मिठो आलु
बीटा क्यारोटीनले सुक्खा, सुस्त कपालबाट जोगाउँदछ र तपाईंको खोपडीमा रहेको ग्रन्थिहरूलाई उत्प्रेरित गर्दछ, तेलमा तरल पदार्थ बनाउने सेबमलाई। सुन्तला रंगको फलफूल र तरकारीहरू जस्तै गाजर, कद्दू, क्यान्टलाप, आम र मीठो आलु यसको प्रमुख स्रोत हुन्।
स्वस्थ लकहरूको लागि कपालको देखभाल सल्लाहहरू
१. नियमित ट्रिमहरू
टिप्स नजिकै कपाल सबैभन्दा बिग्रन्छ, र हरेक छ देखि आठ हप्तामा राम्रो ट्रिमले तपाईको समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्दछ। बिग्रिएको कपालमा पराल जस्तो बनावट हुन्छ, र विकास बढाउन र हटाउन काटिन सकिन्छ विभाजन समाप्त हुन्छ ।
तनाव धेरै स्वास्थ्य समस्या को एक मूल कारण हो, कपाल झर्ने सहित। यसले कपालको बृद्धि प्रक्रियामा पनि अवरोध ल्याउन सक्छ र अकाल टुसा लाग्न सक्छ। फेरि, ध्यान र योग एक नियमित आधारमा राम्रो तनाव बुस्टर हुन सक्छ।
Hot. तातो स्नान लिनबाट बच्नुहोस्
तातो वर्षाको जत्तिकै आरामदायी, यसले स्ट्रिडहरू डिहाइड्रेट गर्दछ (छालाको जस्तै), र यसको प्राकृतिक तेलको टाउकोको पट्टी खस्छ, यसले सुक्खा, भंगुर कपाल निम्त्याउँदछ जुन विघटनको बढी प्रवण हुन्छ। यसको सट्टा, न्यानो पानीको लागि छनौट गर्नुहोस् र कूलरेट तापमानको साथ कपाल कुल्ल्ने प्रयास गर्नुहोस्।
Et. भिजेको कपाल कम्बि
हाम्रा स्ट्रेंडहरू कहिल्यै अधिक कमजोर र भिज्न सक्ने अवस्थामा भत्काउँदैनन्। त्यसकारण विस्तृत दाँत भएको कंघी प्रयोग गर्नु वा तिनीहरूलाई अनुमति दिनु महत्त्वपूर्ण छ हावा सुख्खा स्टाइलको कुनै पनि प्रकार भन्दा पहिले।
Ight. कडा कपालका स्टाइलहरू लगाउनु
तपाईंको कपाल जराबाट पनि कडा तान्न क्षति हुन्छ र त्यसैले, बेवास्ता गर्नुपर्छ। निदाउँदा कपाल कडा नहुनु पनि उत्तम हुन्छ।
कपाल पतन मा FAQS
Q. मेरो कपाल झर्ने धेरै गम्भीर छ, म के गर्ने?
TO कुनै पनि प्रकारको कपाल झर्नु पर्दा डर्मेटोलॉजिस्ट वा ट्राईकोलॉजिस्टलाई भेट्न जानु उत्तम हुन्छ। एक विशेषज्ञ तपाइँ लाई यसको बारे मा सही प्रकारको दिशा दिन सक्नुहुन्छ।
Q. क्या एलोपेसिया उल्टाउन सकिन्छ?
TO अहिले सम्म, एलोपेशिया areata को लागी कुनै उपचार छैन। जहाँसम्म, सही प्रकारको औषधि र स्वस्थ जीवनशैलीको साथ, अर्को वर्षमा तपाईंको कपाल बढ्ने लगभग %०% संभावना हुन्छ।
फंगल संक्रमण को लागी घर उपचार
Q. के कपाल बिरुवा रोक्न सल्लाह दिइन्छ?
TO कपाल पोष्टको एक प्राकृतिक मोप भएको कपाल प्रत्यारोपण तत्काल हुने कुरा त होइन। यो जरा लिन को लागी करीव months महिना लाग्छ। यससँगै, त्यहाँ पुन: प्राप्ति अवधिसँग सम्बन्धित जटिलताहरू छन्। यसका बारे मा ट्राइकोलॉजिष्टसँग परामर्श लिनु उत्तम हुन्छ किनभने पूर्ण जाँच पछि मात्र तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ कि यो प्रक्रिया आवश्यक छ कि छैन।
तपाईं पनि मा पढ्न सक्नुहुन्छ सजिलो र प्रभावकारी कपाल झर्ने उपचार ।
अनावश्यक अनुहारको कपालको लागि घरेलु उपचार
चित्र र तिनीहरूको फाइदाहरूका साथ विभिन्न प्रकारका योग आसनहरू
कसरी घरेलू उपचारको साथ लामो र बाक्लो कपाल प्राप्त गर्ने
चमकदार छालाका लागि घरेलु सुझावहरू
कपाल हुर्काउने प्राकृतिक तरिकाहरू
कसरी रूसी र केश झर्ने उपचार